Linoleic Acids (CLA) a na-akpọ Conjugated: Gịnị ka acid a ọdụdụ na-emere anyị?
1.Gịnị Bụ Conjugated Linoleic Acids (CLA)? Acino nke Linoleic Acid nwere nke ezinụlọ nke ọdụdụ abụba nke enwetara site na ngwaahịa anụmanụ dịka mmiri ara ehi na anụ. A na-akpọkwa ogige a dịka CLA (121250-47-3) ma nwee ezigbo acids omega-6. Linoleic Acids bụ ụdị abụba polyunsaturated nke nwere mmetụta bara uru na obi anyị dịka AHA (American Heart Association) si kwuo. CLA bu kwa uzo nke…
Agụperoxidase Na-ahụ Maka Ihe Na-ahụ Maka Ihe Okike: Ọrụ, Sistem, Ngwa & Nchedo
Nchịkọta Lactoperoxidase Lactoperoxidase (LPO), nke a na-ahụ na gland na mammary gland, bụ ihe dị oke mkpa na nzaghachi mgbochi ọrịa dị mkpa iji nọgide na-enwe ahụike dị mma. Ọrụ kachasị mkpa nke lactoperoxidase bụ oxidize ionioyanyan ion (SCN−) nke a na-ahụ na mmiri n'ihu hydrogen peroxide nke na-ebute ngwaahịa ndị na-egosi ọrụ mgbochi. LPO achọtara n’ime mmiri ara bovine etinyere n’ọrụ ahụike, nri, na ịchọ mma…
Immunoglobulin inyocha Immunoglobulin (ihe mgbochi), bụ mkpụrụ ndụ glycoprotein nke mkpụrụ ndụ ọbara na-emepụta. Ihe mgbochi Immunoglobulins na-arụ ọrụ dị mkpa na ịchọpụta na ịrapara na ụfọdụ ọgwụ nje dịka nje na nje. Ọgwụ ndị a na-enye aka na mbibi nke ọgwụ ndị ahụ. Ya mere, ha na-etolite akụrụngwa mmeghachi omume nke ihe mgbochi. Enwere ụdị Immunoglobulin ise dị na anụmanụ na-enye placental, dabere na ...
1. Isi Oyster 2. Gịnị bụ Oyster Peptide? 3. Oyster Peptide Ọrụ na Uru 4. Gịnị bụ Oyster Peptide Uru Mgbe ejiri ya na ngwaahịa Mmekọ Mmekọ ndị ọzọ? 5. Etu esi ewere Oyster peptide ntụ ntụ? Oyster peptide usoro onunu ogwu? 6. Oyster Peptide Side Mmetụta? Ngwa Oyster Peptide Powder? 7. Okwu ikpe azu Oyster nnyocha Oyster, anụ mmiri bụ nke…
1. Gini bu leuprorelin acetate? 2. Ngwa Leuprolide acetate 3. Kedu ka leuprolide acetate si arụ ọrụ 4. Etu esi eji leuprorelin acetate? 5. Leuprorelin acetate Usoro onunu ogwu na leuprorelin acetate Administ 6. Leuprorelin acetate side 7. 1. Mmechi XNUMX. Gini bu leuprorelin acetate? Leuprorelin acetate bụ ụdị peptide nke ejiri ọgwụ ndị ọzọ jikọtara ọnụ maka prostate ...
1. Gịnị bụ Semax Peptide? 2. Semax Ngwa 3. Uru Semax 4. Kedu ka Semax si arụ ọrụ? 5. Kedụ ka m ga-eji Semax? 6. Ọ nwere mmetụta ọ bụla dị na ya mgbe ị na-eji Semax? 7. Ikwesiri iji Semax stack mgbe ị na-eji? 8. Kedu ọdịiche dị n'etiti Semax vs Selank? 9. Ebee ka m ga enweta Semax na ntanetị? A malitere Semax na 1980s na 90s, emesịa kwadoro na Russia ...